TOEFL အတွေ့အကြုံ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -toeictw.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan TOEFL အတွေ့အကြုံ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်ပမှာလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်,ငါလည်စည်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့'s ကို dual-ဒီဂရီပရိုဂရမ်တစ်ခု.သို့သျောလညျး,ငါ freshman အခါငါ့အ TOEIC ရမှတ် 205 ခဲ့သည်.လည်စည်း TOEIC နှင့် TOEFL သင်တန်းများအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်,ထိုကဲ့သို့သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသဒ္ဒါအဖြစ်,နားထောင်ခြင်းနှင့်ဖတ်ရှုခြင်း.အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူဖို့အားလပ်ချိန်အသုံးပြုခြင်း,ဆရာကအောက်ပါ'ခြေရာ,နှင့်ကတရွေ့ရွေ့အင်္ဂလိပ်စွမ်းရည်ကိုစုဆောင်း,နောက်ဆုံး,ငါတတိယနှစ်တွင်အတွက် TOEFL ITP အတွက် 517 ရတယ်,သောကျောင်းအပ်တံခါးခုံထက်ပင်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ပါသည်!